डा. सिके राउतको पार्टी चुनावमा जान तयार - HongKong Khabar
डा. सिके राउतको पार्टी चुनावमा जान तयार
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १०, २०७७ समय: ११:१०:४६
रुपन्देही । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके राउतले राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा रहेकोले त्यसप्रति अहिले केही नबोलेपनि संसद पुनःस्थापना नभए आफूहरू चुनावमा जान तयार रहेको बताएका छन् ।
राउतले संसद विघटनलाई भने असामान्य घटनाको संज्ञा दिएका छन् ।
आइतबार रुपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै राउतले करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकारले काम गर्न दिइएन भनेर संसद विघटन गर्नु कमजोरी भएको बताए ।
राउतले नेपालमा अहिलेसम्म सबै व्यवस्था फेल हुँदै गएकाले जनता निराश भएको बताए । जनताले चुनावमा सहि व्यक्ति चयन गर्न नसक्दा व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था नफेरिएको भन्दै अब हुने चुनावमा सहि व्यक्ति चुन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नागरिक समाजका नाममा हुने गरेका आन्दोलन र विरोध कार्यक्रममा पनि राजनीतिक रंग देखिएको राउतको आरोप छ ।